“Waan ka xumahay Van Dijk… Messi waa inuu kaa horreeyaa” – Sadio Mané – Gool FM
(Liverpool) 20 Okt 2019. Weeraryahanka reer Senegal iyo kooxda Liverpool ee Sadio Mané ayaa si cad u sheegay in Lionel Messi uu u qalmay ku guuleysiga abaal-marinta laacibkii ugu fiicnaa sanadka ee FIFA The Best, marka loo fiiriyo saaxiibkiis Rads ee Virgil van Dijk.
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka ee FIFA THE BEST, waxaana uu ku guddoomay magaalada Milan oo abaal-marinnada FIFA lagu bixiyay, isagoo ku garaacay xiddigaha Virgil van Dijk iyo Cristiano Ronaldo.
Wargeyska “Sunday Times” ee dalka England ayaa soo xigtay wareysi uu bixiyay Sadio Mané wuxuuna yiri:
“Waa amaan aad u fiican marka uu Lionel Messi kuu codeeyo, marka loo fiiriyo halka aan ka imid, taasi waxay muujineysaa inaan soo qabtay shaqo aad u adag ee xirfadeyda kubadda cagta ah”.
“Waxa kaliya aan u sheegi karo ciyaartoyda da’ayarta soo koreysa ayaa ah inay sii wadaan shaqada adag ay qabanayaan si ay u difaacdaan riyooyinkooda”.
Intaas kaddib Sadio Mané ayaa wuxuu ka hadlay aragtidiisa kaga aadan abaal-marintii FIFA THE BEST uu ku guuleystay Lionel Messi wuxuuna yiri:
“Virgil van Dijk waa laacib weyn, laakiin waan ka xumahay isaga, sababtoo ah Messi ayaa ah kan ugu fiican waana inuu isaga ka horeeyaa” ayuu hadalkiisa ku soo xiray Mané.